Realme waa sumadda taleefanka ee leh koritaanka ugu sarreeya | Androidsis
Realme waa nooca taleefanka ugu dhaqsaha badan adduunka oo dhan
Realme waa summad suuqeedu sii kordhayo. Shirkadda ayaa dhowaan la furay telefoonada suuqyada sida Spain, halkaas oo ay awood u leedahay inay la tartanto noocyada sida Xiaomi. Intaa waxaa dheer, caalami ahaan shirkaddu waxay ku guuleysanaysaa koboc cajiib ah, sida ay muujinayaan tirooyinka. Waa nooca ugu koritaanka badan adduunka.
Xaqiiqdii, muddo sannad gudihiis ah, astaanta ayaa ka soo baxday noocii ugu iibsiga badnaa ee 47-aad illaa kan toddobaad ee ugu iibsiga wanaagsan adduunka. Dhammaan tan oo leh koror iib ah 808%. Taas oo cadeynaysa horumarka baaxada leh ee ay Realme soo martay ilaa sanadkii hore.
Sannadkan oo dhan waxaan aragnay sida Realme ay u soo kordheysay joogitaankeeda suuqyada sida Hindiya ama Indooniisiya. Intaa waxaa dheer, bilawgii sanadka calaamaddu waxay horey u caddeysay qorshayaasheeda inay ku bilawdo iibinta taleefannada dalal ay ka mid yihiin Spain. Wax ay sameeyeen oo taasi waxay si cad u caawinaysaa koritaankaas.
Xilligan shirkadda wuxuu ku fiday in ka badan 20 suuq oo adduunka ah. Istaraatiijiyad si fiican u shaqeyneysa oo ka caawineysa iibkeeda ayaa cirka isku shareertay tan iyo rubucii seddexaad ee sanadkii hore. Kobaca ayaa ka sarreeya dhammaan noocyada.
Intaa waxaa sii dheer, guushaan Realme waa mid aad ufiican markaan tixgalino taas iibinta taleefannada ayaa hoos u dhacaya adduunka. Waxay ka mid yihiin noocyada yar ee aan keli ku koraan, laakiin ku samee heer aan la joojin karin. Waqtigan xaadirka ahna waxay umuuqataa in jihadaani socon doonto in muddo ah.
Marka waxaan arki karnaa inay wali jirto boos koritaanka iyo inbadan lagu iibiyo suuqa casriga. In kasta oo ay jiraan magacyo yar oo ka faa’iideysanaya. Arinta Realme way cadahay inay sifiican usocdaan. Waxa kale oo cad in wuxuu ku dhamaan doonaa sanadka tobanka magac ee ugu iibinta badan adduunka oo dhan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme waa nooca taleefanka ugu dhaqsaha badan adduunka oo dhan
Faahfaahinta kaamirooyinka Xiaomi Mi CC9 Pro ayaa shaaca laga qaaday
Xiaomi Pocophone wuxuu ugu dambeyntii helayaa xasilloonida MIUI 11 adduunka oo dhan